トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Tombontsoa sy ny fatiantoka ny efitrano fandraisam-bahinin'ny pachinko ny fiovam-po tahan'ny
Rehefa mandeha any amin'ny pachinko sy ny slot, Heveriko aloha fa ny fiovam-po isaky ny manahy. Common amin'ny pachinko efi-trano, ny habetsahan'ny ny baolina, rehefa hampisambotra ny mpanjifa, iray amin'ireo 4 Yen, dia lasa iray 20 Yen medaly. Taona vitsivitsy lasa izay, Ichipachi sy 5 Yen slot, sns, nefa nivoaka na dia ambany bola baolina, ny fiovam-po tahan'ny amin'ny fotoana sy ny vola ny baolina medaly namoaka Na ahoana na ahoana, dia tonga zavatra tsara tapa-kevitra tamin-kalalahana ny tsirairay trano izy pachinko ianao.
tahan'ny vola, dia tena zava-dehibe amin'ny famaritana ny politika miasa ho an'ny pachinko parlors. Ao
, any amin'ny avo-cashing toeram-pivarotana sy iva-cashing fivarotana, nametraka modely sy ny lafiny miady, sns, dia te-hahita ny karazana fahasamihafana misy ny. Amin'ny maha-mpanjifa, Mino aho fa mazava ho azy miaraka amin'ny olona avy amin'ny avo vola dia mahafinaritra, ny zava-misy izay hisolo ny payout dia amin'ny avo tahan'ny fiovam-po, ny fivarotana, tsy misy intsony ny famoriam-bola dia tsy maintsy.
ara-dal?na ny vokatra avy amin'ny raharaham-barotra, fantsika Lasa hanenjanany maz?na, dia matetika ihany koa ny toerana misy dikany izany rehetra-1. Na dia ny zava-nitranga, ary nanokatra ny hombo lehibe ka any, koa mahatonga azy sarotra ny hampitombo ny toerana kafa, dia aoka ihany ny toerana avo. Pachinko efitrano fandraisam-bahinin'ny avo vola, raha tsy mitandrina kely, tsy afaka ho nisintona ny fikarakarana izany dia avy hatrany tonga fahampiam.
Raha fintinina, satria dia tena sarotra ny hampiseho ny payout, raha mijery avy amin'ny mpanjifa, Mino aho fa maro ihany koa fa tsy handao toka tsy havelako izy. Noho izany, tao amin'ny efitrano fandraisam-bahinin'ny pachinko ny vola avo, matetika isika no miantsena izay indrindra nanangana modely maro antsoina hoe avo-spec. Big hira azo inoana dia avo, fampiasam-bola ihany koa antenaina vola be.
Na izany aza, na dia rehefa jerena avy amin'ny lafiny mpanjifa, avo-spec avo-cashing fivarotana, mitarika ho amin'ny fandresena lehibe ny baolina, raha tany. Pachinko efitrano fandraisam-bahinin'ny avo avotana ihany izany, mitombo ny fampiasam-bola ihany koa ny vola no kely, raha ny marina, ny mety mba handresy ny mety izay indray, avo ho anareo. Misy Na izany aza, dia tombontsoa lehibe indrindra ny vola avo. Mandresy fantany, raha hira, dia ny hoe tsara kokoa ny hiady amin'ny lavitra ao amin'ny efitrano fandraisam-bahinin'ny pachinko vola avo.
mifamadika amin'izay, ambany-cashing fivarotana, matetika Fa ny fantsika dia tonga mamy avy any koa, na dia mety ho misy-kafa ny slot ny andro. Koa satria hafainganam-pandeha no mahazo, ilay ambony kokoa ny mety mba hanao ny hira lehibe. Na dia izany aza, na iza na ny payout ny fahazoana, miankina amin'ny habetsaky ny vola fampiasam-bola, ianao koa amin 'ny zava-misy fa vitsy Fandresena. Ao ambany toy izany vola ny pachinko efi-trano, ny kilalao mora ny modely izay voalaza fa mamy nomerika sy afovoany karazany specs, dia mirona amin'ny hametraka maro no ho ambony kokoa.
, raha ny zava-misy izay te-hifandray lehibe hira, fa pachinko efitrano fandraisam-bahinin'ny vola ambany dia soso-kevitra, dia heveriko fa tena sarotra ny handresy lehibe. Ao amin'ny fivarotana vola avo, fandresena lehibe dia antsoina hoe ny mpanjifa nahazo ahy hanandrana hihaona amin'ny, ao amin'ny iva-cashing fivarotana, dia miavaka amin'ny antso ny mpanjifa mba hanandrana eo nangataka ny hatsarana ho zavatra filalaovana.
Tamin'izany fomba izany, ny fiovam-po tahan'ny dia noho ny fahasamihafan'ny fomba milalao, efa niova ihany koa ny fivarotana hisafidy.
mitovy fifanakalozana, mafy fototra amin'ny avo tahan'ny fiovam-po ao amin'ny toeram-pivarotana, dia ny tsara indrindra dia ny mikendry afa-tsy amin'ny fotoana Pin tsara ny fotoana. Fampidinana ny tahan'ny fiovam-po, fa dia ny fironana farany iray manontolo, toy ny maro-kafa toerana, mirona ho Naparitaka dia kamo. Time dia tsy mahasoa loatra na dia eo aza ny fijaliana, dia ho toy ny - no ho ao amin'ny oktety ny andro mpiasa. Noho ny maha samy hafa ny hatsaran-tarehy lafiny, koa izany no nanova ny fivarotana hisafidy.
mitovy fifanakalozana, mafy fototra amin'ny avo tahan'ny fiovam-po ao amin'ny toeram-pivarotana, dia ny tsara indrindra dia ny mikendry afa-tsy amin'ny fotoana Pin tsara ny fotoana. Fampidinana ny tahan'ny fiovam-po, fa dia ny fironana farany iray manontolo, toy ny maro-kafa toerana, mirona ho Naparitaka dia kamo. Time dia tsy mahasoa loatra na dia eo aza ny fijaliana, dia ho toy ny - no ho ao amin'ny oktety ny andro mpiasa.